Weerar Bambaano Oo Ka Dhacay Degmada Yaaqshiid
Thursday January 10, 2019 - 21:04:47 in Wararka by Mogadishu Times
Gelinkii dambe ee Maanta ayaa weerar bambaano oo khasaaro geystay waxaa lagu qaaday Xarunta Maamulka degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir. Goobjogayaal aan la hadalnay ayaa waxa ay Dalsan u sheegeen in Bambaanooyinkaas lagu tuuray Gudaha Xarunta xi
Gelinkii dambe ee Maanta ayaa weerar bambaano oo khasaaro geystay waxaa lagu qaaday Xarunta Maamulka degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir. Goobjogayaal aan la hadalnay ayaa waxa ay Dalsan u sheegeen in Bambaanooyinkaas lagu tuuray Gudaha Xarunta xili Shaqooyin ay ka socdeen Xarunta degmada.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in bambaanooyinka qaar ay ku dhaceen Gudaha Xarunta,isla markaana ay ku dhaawacmeen Saddex ruux oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dad dacwooyin u tegay Xarunta dgemada.
Majirto cid loo qabtay weerarlaas,hayeeshee Ciidamo Boolis ah oo ku sugan Xarunta ayaa bilaabay howlgal ay ku baadi goobayaan dadkii bambaanooyinka Xarunta ku weeraray,kuwaas oo la sheegay inay baxsadeen.
Dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale waxaa bambaanooyin lagu weeraray Xarunta Maamulka degmada Yaaqshiid,waxana ugu dambeysay dhamaadkii Bishii December ee Sanadkii tegay ee 2018 oo weerar bambaano lagu qaaday Xaruntaas.